Mitemo Yedu Yechitoro
Kujeka uye Kuchengeta
Mumusika wanhasi wepamhepo, kutendeseka ndiyo nzira yakanakisa. Ndicho chikonzero isu takagadzira inonyanya kupa uye yakajeka gwara rechitoro chevatengi vedu. Verenga pazasi kuti udzidze zvakawanda uye usazeze kutibata nesu nemibvunzo!
Muviri Positive Revolution Yakavanzika Policy
Iyi Yakavanzika Policy inotsanangura kuunganidzwa kwemashoko ako ega, mashandisirwo, uye kugovaniswa paunoshanyira kana kutenga kubva (iyo "Saiti").
Paunoshanyira Saiti, isu tinobva tangounganidza rumwe ruzivo nezve chako chishandiso, kusanganisira ruzivo nezve yako webhu bhurawuza, IP kero, nguva yenguva, uye mamwe makuki akaiswa pane yako kifaa. Pamusoro pezvo, paunenge uchitarisa paSiti, tinounganidza ruzivo nezve mamwe mapeji ewebhu kana zvigadzirwa zvaunoona, ndeapi mawebhusaiti kana mazwi ekutsvaga akakuendesa kuSiti, neruzivo nezve maitiro aunoita neSiti. Isu tinotaurira urwu ruzivo rwoga-rwunounganidzwa se "Ruzivo rweMidziyo."
Isu tinounganidza Ruzivo rweMidziyo tichishandisa matekinoroji anotevera
- "Log mafaira" track zviito zvinoitika paSiti, uye unganidza data inosanganisira yako IP kero, browser mhando, Internet sevhisi inopa, inoreva / kubuda mapeji, uye zuva / nguva zvitambi.
- "Web beacon," "tag," uye "pixels" mafaira emagetsi anoshandiswa kunyora ruzivo nezve maitikiro aunoita Saiti.
Pamusoro pezvo paunotenga kana kuyedza kutenga kuburikidza neSiti, isu tinotora mamwe mashoko kubva kwauri, kusanganisira zita rako, kero yekubhadharisa, kero yekutumira, ruzivo rwekubhadhara (kusanganisira nhamba dzekadhi rechikwereti), kero yeemail, uye nhamba yefoni. Isu tinotaurira ruzivo urwu se "Order Ruzivo."
Kana isu tichitaura nezve "Ruzivo rweMunhu" mune ino Yakavanzika Policy, tiri kutaura zvese zviri zviviri nezve Chidimbu Ruzivo uye Hodhi Ruzivo.
TINOSHANDISA SEI YAKO Ruzivo?
Isu tinoshandisa iyo Order Ruzivo iyo yatinounganidza kazhinji kuzadzisa chero maodha akaiswa kuburikidza neSiti (kusanganisira kugadzirisa yako yekubhadhara ruzivo, kuronga kutumira, uye kukupa iwe ma invoice uye / kana odha simbiso). Pamusoro pezvo, isu tinoshandisa iyi Order Ruzivo ku:
Screen mirairo yedu ingangoita njodzi kana kubiridzira; uye
Kana uchienderana nezvinodiwa iwe zvawakagovana nesu, zvinokupa iwe ruzivo kana kushambadzira zvine chekuita nezvigadzirwa zvedu kana masevhisi.
Isu tinoshandisa Ruzivo rweDhizaiti rwatinounganidza kutibatsira kutarisisa njodzi dzinogona kuvepo uye hunyengeri (kunyanya IP kero yako), uye zvakanyanya kugadzirisa nekukwirisa Saiti yedu (semuenzaniso, nekugadzira analytics nezvekuti vatengi vedu vanoongorora nekudyidzana sei iyo Saiti, uye kuongorora kubudirira kweshambadziro yedu uye kushambadzira mishandirapamwe).
Kugovana Ruzivo Rwako Pachedu
Isu tinogovana Ruzivo Rwako nevechitatu mapato kuti vatibatsire kushandisa Ruzivo Rwako, sezvakatsanangurwa pamusoro. Semuenzaniso, isu tinoshandisa Wix kusimbisa chitoro chedu chepamhepo - unogona kuverenga zvakawanda nezvekuti Wix anoshandisa Sei Ruzivo Rwako Pano: https://www.wix.com/legal/privacy. Isu tinoshandisa zvakare Google Analytics kutibatsira kunzwisisa mashandisiro anoita vatengi vedu Saiti - iwe unogona kuverenga zvakawanda nezve mashandisiro anoita Google Ruzivo Rwako Pano apa: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Iwe unogona zvakare kubuda muGoogle Analytics pano: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Chekupedzisira, isu tinogona zvakare kugovana Rwako Rwako Ruzivo kutevedzera inoshanda mitemo nemirau, kupindura kune subpoena, yekutsvaga gwaro kana chimwe chikumbiro chepamutemo cheruzivo rwatinogamuchira, kana neimwe nzira kuchengetedza kodzero dzedu.
Sezvatsanangurwa pamusoro, isu tinoshandisa Rwako Rwako Ruzivo kukupa iwe yakanangwa kushambadza kana kushambadzira kutaurirana isu tinotenda kungave kunakidza iwe. Kuti uwane rumwe ruzivo nezvekuti zvakanangwa kushambadza zvinoshanda sei, unogona kushanyira iyo Network Advertising Initiative's (“NAI”) peji redzidzo pa http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.
Pamusoro pezvo, unogona kusarudza kubva kune mamwe eaya masevhisi nekushanyira iyo Dhijitari Yekushambadzira Alliance-yekubuda portal pa: http://optout.aboutads.info/.
Ndokumbira utarise kuti isu hatichinje yedu Saiti kuunganidzwa kwedata uye kushandisa maitiro patinoona Usateedzere chiratidzo kubva kubhurawuza rako.
Kana iwe uri mugari wemuEurope, une mvumo yekuwana ruzivo rwega rwatinobata pamusoro pako uye kukumbira kuti ruzivo rwako rwega rugadziriswe, ruvandudzwe, kana kubviswa. Kana iwe uchida kushandisa iri kodzero, ndapota taura nesu kuburikidza neruzivo rwekuonana pazasi
Pamusoro pezvo, kana iwe uri mugari wemuEurope tinocherekedza kuti tiri kugadzirisa ruzivo rwako kuti tizadzise zvibvumirano zvatingave newe (semuenzaniso kana iwe ukaita odha kuburikidza neSiti), kana neimwe nzira kuteedzera yedu zviri pamutemo bhizinesi zvakanyorwa pamusoro. Pamusoro pezvo, ndapota cherekedza kuti ruzivo rwako rwuchaendeswa kunze kweEurope, kusanganisira kuCanada neUnited States.
Kana iwe ukaisa odha kuburikidza neSiti, isu tinochengetedza yako Order Ruzivo kune edu marekodhi kunze kwekunge uye kusvikira iwe watikumbira kuti tidzime iyi ruzivo.
Iyo Saiti haina kuitirwa vanhu vari pasi pezera re13.
Tinogona kugadzirisa iyi yekuvanzika nguva nenguva kuti tiratidze, semuenzaniso, shanduko kune edu maitiro kana zvimwe zvikonzero zvinoshanda, zviri pamutemo kana zvekumira.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve edu zvakavanzika maitiro, kana iwe uine mibvunzo, kana kana iwe uchida kuita chichemo, ndapota taura nesu ne-e-mail pa usarng24@gmail.com kana netsamba uchishandisa ruzivo rwakapihwa pazasi:
© 2020 na #BoPoRev. Kudada kwakagadzirwa neWix.com